Dị Mkpa PH-1: Andy Rubin mbụ ama bụ ugbu a ukara na sọrọ igwefoto na ihuenyo na-enweghị bezels | Gam akporosis
PH-1 dị mkpa: Andy Rubin mbụ smartphone bụ ugbu a na-eji igwefoto abụọ na ngosipụta na-enweghị bezels
Andy Rubin, onye okike nke gam akporo na onye guzobere ụlọ ọrụ ahụ dị mkpa, emesịrị gosipụta PH-1 ọhụrụ ọhụụ na ihuenyo na-enweghị ntụpọ na ọtụtụ atụmatụ na-adọrọ mmasị. Agbanyeghị na aha ekwentị ahụ na - ahụ maka ekwentị mkpanaaka bụ PH-1, ọ ga - abụrịrị na ọtụtụ ga - ejedebe na - ezo aka na ya dị ka “ekwentị dị mkpa”.
Ngwaọrụ ọhụrụ ahụ na-eweta ụfọdụ ọmarịcha njirimara pụrụ iche, yana atụmatụ dị egwu. Ihe ngosi nke mobile ọhụrụ ahụ bụ nnukwu ihuenyo ya, nke yiri ka ọ na-ekpuchi ihu n'ihu ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kpamkpam, na-ahapụ naanị obere oghere maka ala.
Na elu, ihuenyo na-egosi na agbatị dị ka o kwere mee, na-ahapụ obere oghere maka igwefoto ma na-eduga na a imewe yiri nnọọ Xiaomi Mi Mix.
Dị mkpa kwuru na ngosipụta PH-1 bụ “Ngosipụta zuru ezu”Site na nsọtụ rue na nsọtụ (5.7 sentimita) nwere nkuku gbara gburugburu na akụkụ 19:10, buru ibu karịa ngebichi na Galaxy S8 na LG G6.
Igwefoto abuo nwere ihe mmetụta 13 megapixel
N'agbanyeghị nke ahụ, PH-1 nwere a LTPS LCD ihuenyo na ọ bụghị OLED, na a kacha ihie nke 500 nits na mkpebi nke Pikselụ 2560 x 1312, na mgbakwunye na nchebe Gorilla Glass 5.
Ewezuga nke a, o nwekwara ihe mmetụta 13 megapixel abụọ n’azụ, otu n'ime ha RGB na ndi ozo monochrome. Otu n'ime sensọ ahụ nwekwara oghere nke F / 185 ma na-enye mmetụ ahụ na-enweghị isi, yana laser na usoro nchọpụta autofocus usoro, yana ikike ịse vidiyo 4K.
N'aka nke ozo, Igwefoto n'ihu nwere ihe mmetụta 8 megapixel nwere oghere F / 2.2, na mobile nwekwara titanium etiti na seramiiki azụ panel.
Mgbe ị na-ekwu maka ihe dị n'ime ya, ngwaọrụ ahụ na-etinye ihe nhazi ahụ Snapdragon 835, 4GB nke Ram na 128GB nke ebe nchekwa dị n'imeyana ọdụ ụgbọ USB-C na batrị 3040mAh.
N'ikpeazụ, a ga-enye PH-1 na agba abụọ, oji na ọcha, ebe ndo nke isi awọ na acha anụnụ anụnụ ga-abịa ma emechaa. Maka ọnụahịa, ekwentị dị mkpa ga-efu 700 dollar ma ọ gaghị erute ndị na-ebu US.
Agbanyeghị, maka mgbakwunye $ 50, ndị ọrụ ga-enwe ike ịnweta ngwa dị iche iche maka ekwentị, gụnyere a igwefoto na 360 ogo ndekọ, a n'ọdụ ụgbọ mmiri iji na-ana mobile mobile na ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » PH-1 dị mkpa: Andy Rubin mbụ smartphone bụ ugbu a na-eji igwefoto abụọ na ngosipụta na-enweghị bezels
Echiche dị iche iche nke LG V30 na-egosi ihuenyo ọhụụ zuru oke na agba dị iche
Unlimited free ojii nchekwa. Imaghi onye n’enye gi ya? Mba, ọbụghị Google!